Geopois.com - yintoni na? -Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/I-Geopois.com -Yintoni?
Kutshanje sithethe noJavier Gabás Jiménez, iinjineli zeGeomatics kunye neTografi, uMagister eGeodesy naseCartography - iPytechnic University yaseMadrid, kunye nomnye wabameli beGeopois.com. Sifuna ukufumana kuqala lonke ulwazi malunga neGeopois, eyaqala ukwaziwa ukusukela nge2018. Siqale ngombuzo olula, Yintoni iGoopois.com? Njengoko sazi ukuba, ukuba singena kulo mbuzo kwisiphequluli, iziphumo zinxulunyaniswa kwinto eyenziweyo kunye neenjongo zeqonga, kodwa kungabi njalo.
UJavier usiphendule wathi: "I-Geopois yiNtanethi yeThutho yeNtlalontle yezobuchwepheshe beTekhnoloji yeLizwe (i-TIG), iinkqubo zolwazi lwendawo (GIS), inkqubo kunye neMephu yewebhu". Ukuba siyayazi inkqubela phambili yezobuchwepheshe kule minyaka idlulileyo, ukudityaniswa kwe-GIS + BIM, umjikelo wobomi be-AEC, ukufakwa kwezixhobo ezikude zokuhlola, kunye nemephu yewebhu -neyenza rhoqo indlela yayo kwi desktop GIS-Sinokufumana umbono wento apho iGeopois ikhombe khona.
Umbono weGeopois.com weza njani kwaye ngubani ongemva kwayo?
Umbono wazalwa ngo-2018 njengeblogi elula, bendihlala ndithanda ukubhala kwaye ndabelana ngolwazi lwam, bendiqala ukupapasha imisebenzi yam eyunivesithi, ibikhula kwaye ithatha ubume bayo kwinto ekuyiyo namhlanje. Umnqweno kunye nentshiseko emva kwethu nguSilvana Freire, uthanda iilwimi, uthetha isiPanish, isiNgesi, isiJamani nesiFrentshi. IBachelor yoLawulo lweShishini kunye noMphathi woCazululo lwezoBudlelwane bezoQoqo beHlabathi; kunye neseva uJavier Gabás.
Zingaba yintoni iinjongo zeGeopois?
Ukwazi ukuba kukho izixhobo ezininzi kunye nezicwangciso zokwakha / uhlalutyo lwedatha yendawo. “I-Geopois.com yazalwa inombono wokusasaza iTekhnoloji yoLwazi lweJografi (GIT), ngendlela esebenzayo, elula nefikelelekayo. Kanye nokudala uluntu lwabaphuhlisi be-geospatial kunye neengcali kunye nosapho lwabathandi be-geo. "
I-Geopois.com ibonelela ntoni kuluntu lwe-GIS?
Umxholo othile: Senza ubuchwepheshe be-geospatial teknoloji enomxholo ophakamileyo kwinkqubo kunye nokudityaniswa kwenxalenye yamathala eencwadi kunye ne-APIS yemephu yewebhu, ugcino lwendawo kunye ne-GIS. Ngokukodwa tutorials zasimahla zilula kwaye ziqonde ngokuthe ngqo kumxholo obanzi weetekhnoloji ze-TIG.
Unxibelelwano olusondele kakhulu: Ngeqonga lethu kunokwenzeka ukuba unxibelelane nabanye abaphuhlisi kunye nabanomdla kwicandelo, babelane ngolwazi kwaye bahlangane neenkampani kunye nabaphuhlisi.
Uluntu: Uluntu lwethu luvulekile ngokupheleleyo, lubandakanya iinkampani kunye neengcali zecandelo, abaphuhlisi be-geospatial kunye nabathakazelela ubuchwepheshe be-geo.
Ukubonakala: Sinika ukubonakala kubo bonke abasebenzisi bethu kwaye ngakumbi abo sisebenzisana nabo, sibaxhasa kwaye sisasaza ulwazi lwabo. ”
Kwiingcali zeGIS, ngaba kukho amathuba okubonelela ngolwazi lwabo ngeGeopois.com?
Ewe, simema bonke abasebenzisi bethu ukuba babelane ngolwazi lwabo nge tutorials, uninzi lwabo sele bekhuthele kwaye basebenze nathi ngenkuthalo. Sizama ukubabingca ababhali bethu, sibanike ukubonakala okuphezulu kwaye sibanike iwebhusayithi esemgangathweni apho banokuzibonakalisa kwaye babelane ngokuthanda kwabo kwihlabathi le-geo.
Oko kuyathethwa, ngale nto unxibelelwano Banokufika kwiwebhu kwaye baqale ukuba yinxalenye yeGeopois.com, umnikelo omkhulu kubo bonke abanomdla kuluntu lwe-Geo abafuna ukuqeqesha okanye ukubonelela ngolwazi lwabo.
Sijonge kwiwebhu ebhekisa "Geoinquietos", Geoinquietos kunye geopois.com iyafana?
Hayi, amaqela e-Geoinquietos ngabahlali base-OSGeo, isiseko esinjongo sayo ikukuxhasa ukuphuculwa kwesoftware ye-geospatial software, kunye nokukhuthaza ukusetyenziswa kwayo. Siliqonga elizimeleyo nangona kunjalo sabelana ngeenjongo ezininzi ze-Geoinquietos, umdla, iinkxalabo, amava okanye nayiphi na imbono kwicandelo le-geomatics, isoftware yasimahla kunye netekhnoloji ye-geospatial (yonke into enxulumene nentsimi ye-GEO ne-GIS).
Ngaba ucinga ukuba emva kobhubhane, indlela esiyisebenzisa, esiyidlayo kunye nokufunda ithathe ithuba elingalindelekanga? Ngaba le meko yeGlobal inempembelelo elungileyo okanye embi kwiGoopois.com?
Ayisiyondawo yokujika engalindelekanga, kodwa ukuba ithe yahambela phambili, ikakhulu ukude ngemfundo, ukufunda nge-e-ukufunda kunye nokufunda m, kwiminyaka yakutshanje ukusetyenziswa kweqonga lokufundisa nge-tele kunye neeNkqubo bezisanda, Ubhubhane uye wayilungelelanisa inkqubo. Ukususela ekuqaleni besisoloko sikhetha ukufundisa nokusebenzisana kwi-intanethi, imeko yangoku isincedile ukuba sifunde ukwenza izinto ngokwahlukileyo kwaye sifune ezinye iindlela zokusebenza, ukusebenzisana nokuphuhlisa.
Ngokwento ebonelelwa nguGeopois, kunye nokufika kwexesha le-4 Ngaba ucinga ukuba kubaCazululi be-GIS kubalulekile ukwazi / ukufunda inkqubo?
Ewe kunjalo, ukufumana ulwazi akuthathi ndawo kwaye nezakhono zokufunda zinokukunceda kuphela. Ayisiyiyo kuphela abahlalutyi be-GIS, ukuba ayingabo bonke ubuchwephesha, itekhnoloji kunye nezinto ezintsha ezingayekiyoyo kwaye ukuba sigxile kwinkalo yethu, ndiyakholelwa ukuba iinjineli ze-TIG kufuneka zifunde ukucwangcisa eyunivesithi kunye nabanye oogxa bejograologists bayazi indlela yokuphucula inkqubo kwaye kuya kuphucula ukubanakho ukunxibelelana ngolwazi lwabo. Ngesi sizathu tutorials zethu zijolise ikakhulu kwinkqubo, kuphuculo lweekhowudi kwiilwimi ezahlukeneyo kunye nokudityaniswa kweelayibrari ezahlukeneyo zeMephu yeWebhu kunye neeIPI.
Ngaba unalo naluphi na uhlobo lweprojekthi okanye ukusebenzisana neenkampani, amaziko okanye amaqonga okwangoku?
Ewe, ngokuqhubekekayo sikhangela amathuba endibano kunye nezinye iiprojekthi, iinkampani, iiyunivesithi kunye nemibutho yobungcali. Ngoku sithatha inxaxheba kwi-ActúaUPM, inkqubo yoRhwebo yeYunivesithi yasePolytechnic yaseMadrid (UPM), esinceda siphuhlise isicwangciso seshishini ukwenza le projekthi ibe nokusebenza. Sijonge kumaqabane obuchwephesha ukuba sibambisane kuphuhliso kunye nabo kwaye sikwazi ukubandakanya nokwenza ingeniso kwinethiwekhi yethu yabaphuhlisi be-geospatial.
Ngaba ukhona umsitho oza kuza onxulumene okanye owalathiswe yi-geopois.com apho uluntu lwe-GIS lungathatha inxaxheba?
Ewe, sifuna ukulinda kude kube emva kwehlobo ukuqala ukudala ii-synergies ezininzi phakathi kwabasebenzisi bethu, ukubamba ii-webinars kunye nemicimbi yokunxibelelana kwe-intanethi. Sithanda ukwenza umnyhadala wophuhliso lwe-hackathon wohlobo oluthile olukhethekileyo kubuchwepheshe be-geospatial kungekudala, kodwa kule nto kusafuneka sifumane abaxhasi ukuba babheje kuyo.
Ufundile ntoni nge geopois.com, usixelele esinye sezifundo esele sishiyelwe kuwe le projekthi ikhule njani kule minyaka mibini?
Ewe, okuninzi, yonke imihla sifunda kunye nee-tutorials ezithunyelwa ngabaququzeleli bethu, kodwa ngakumbi kuyo yonke into ebandakanya ukuphuhliswa kunye nokuphunyezwa kweqonga.
Sobabini mna noSilvana sasingenayo inkqubo yokubuyela ngasemva, ngoko ke kwafuneka sifunde yonke inxenye yokubuyela umva kunye nohlelo kwiseva kwindlela, iinkcukacha zeNOSQL ezinje ngeMongoDB, wonke umceli-mngeni ofunyanwa ngaphambili kunye nesoftware. I-UX / UI ejolise kumsebenzisi, indawo yelifu kunye nokhuseleko kwilifu kwaye ezinye ze-SEO kunye neeNtengiso zeDijithali ngendlela ... Ngokusisiseko uye wemka ekubeni yiGeomatics kunye noGIS ingcali ekuphuhliseni okugcweleyo.
Zonke iiprojekthi ziye zaba namahla ndinyuka, umzekelo, xa saqala ngo-2018 siye sasuka ekuvavanyeni iiSayithi zeGoogle kwiinyanga ezimbalwa zokuqala ukuphumeza yonke into kwi-Wordpress, sifuna ukuphumeza ubuninzi beemephu kunye nokudibanisa amathala eencwadi ahlukeneyo afana Ii-Openlayers, Iphecana, Ibhokisi yeMaphu, iCARTO … Sichithe phantse unyaka ngolu hlobo, sivavanya iiplagi zeplagi kunye nejuggling ukuze sikwazi ukwenza ubuncinci bento ebesiyifuna, sifikelele kwisigqibo sokuba ayisebenzanga, ekugqibeleni ngehlobo lika-2019 kwaye ngenxa yolwazi endilufumene kwi-master degree kwi-geodesy kunye ne-cartography evela kwi-UPM (Javier) sagqiba ekubeni siphelise ubudlelwane bethu kunye nomphathi womxholo kwaye senze konke uphuhliso lwethu, ukusuka kwi-backend ukuya kwi-frontend.
Siphuhlise iqonga kwisiqingatha sesibini sowama-2019 kwaye ngoJanuwari ka-2020 sakwazi ukumilisela into ngoku ebizwa ngokuba yiGeopois.com, nangona kunjalo, yiprojekthi yokuqhubeka kwezinto kwaye siyaqhubeka nokwenza izinto qho ngenyanga ngoncedo lwengxelo evela kuluntu lwethu, ukufunda nokuphucula. apha endleleni .. Ukuba siyazifumana iinethiwekhi zakho zentlalo njenge @Ndiyabonga Kwi-Twitter, sinokwazi konke ukubonelelwa kwe tutorials, amacandelo kunye nolunye ulwazi olunxulumene noko. Sibonile izihloko ezininzi ezinomdla, ezinjengokusetyenziswa kweeTiles iLeaflet, uhlengahlengiso lokulinganiswa kwemihlaba ekwi-Web Viewers ngeTurf.
Ukongeza kwi tutorials, inika ithuba lokufumana umphuhlisi weeprojekthi zakho zesithuba. Inethiwekhi yeengcali zeengcali, zonke izakhono ziboniswa apho ngokweenkcukacha, kunye nendawo abakuyo.
Ngaba ikhona enye into onqwenela ukuyongeza malunga ne-popois.com?
Siyavuya ukutsho ukuba phantse bonke abayi-150 abaphuhlisi bendalo eSpain, eArgentina, eBolivia, eChile, eColombia, eCosta, eCuba, e-Ecuador, e-El Salvador, e-Estonia, eGuatemala, eMexico, ePeru naseVenezuela sele beyinxalenye yoluntu lwethu, kwi-LinkedIn sisondele ukufikelela kubalandeli be-2000 kwaye sele sinabathengi abasi-7 abasithumela kumgangatho ophezulu kunye noqeqesho oluhle kakhulu ngeveki. Ukongeza, sikwazile ukoyisa isigaba sokuqala se-1 se-ActuaUPM kukhuphiswano phakathi kweembono ezingama-17 nabantu abangama-396. Ukusukela ngoJanuwari ka-854 siphindaphinde kathathu inani lotyelelo kwiqonga lethu, kungoko sonwabile ngenkxaso kunye nomdla esiyivelisayo kuluntu lwe-geo.
Kwi-Linkedin Yenyani.comOkwangoku inabalandeli abamalunga ne-2000, apho i-900 ubuncinci ijoyine kwiinyanga ezi-4 ezidlulileyo, apho sonke sidlulile kwinqanaba lokuvalelwa kunye nezithintelo ngenxa ye-COVID 19. Ukuphepha ukusinda kwityala , funda izinto ezintsha- ubuncinci ngewebhu- ongumthombo ongapheliyo wezixhobo. Leyo ngongoma ekuthandeni iipulatifomu ezifana neGeopois, i-Udemy, i-Simpliv okanye i-Coursera.
Ukusuka kumbulelo wethu kwiGeofumadas.
Ngamafutshane, iGeopois ngumbono onomdla kakhulu, odibanisa iimeko ezinokubakho zale meko ngokwemeko yokubonelela ngomxholo, ukusebenzisana kunye namathuba oshishino. Ngexesha elililo lendalo esingqongileyo yokuba yonke imihla ifakwe ngakumbi kuyo yonke into esiyenzayo kubomi bethu bemihla ngemihla. Sicebisa ukuba ubatyelele kwiwebhu Yenyani.com, LinkedIn, kwaye Twitter. Enkosi kakhulu uJavier noSilvana ngokufumana iGeofumadas. Kude ibe lilixa elizayo.